Min Thuta, Author at - Page3of 76
ဘာကြောင့်သင့် Content တွေကမထိရောက်ရတာလဲ ?
90% သော Business တွေဟာ Content Marketing ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုကြပေမဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံလောက်သာ သူတို့ရဲ့ အားထုတ်မှုတွေအောင်မြင်တယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် Content Marketing ပိုင်းမှာ သတိထား ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အလွဲများကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။Content Marketing Strategy ကြောင့်ရရှိခဲ့တဲ့ Audience တွေကလည်း သင့်ရဲ့ Business ကို
Posted by Min Thuta/ နိုဝင်ဘာ 3, 2020/ Blog/0Comment
Business Website တစ်ခု အောင်မြင်လာဖို့ဆိုရင်
Business အတွက် Website ဆောက်လုပ်ပြီး အကျယ်တဝင့် လုပ်ကိုင်ချင်တဲ့ Company တွေ၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေ အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ Business ကိုပိုပြီး အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်ချင်နိုင်ဖို့ အတွက် နည်းလမ်း အချို့ကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်…
ခိုင်မာတဲ့ Website’s Goal တစ်ခုထားရှိဖို့ လိုပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ Business နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Audience ကိုရည်ညွှန်းပြီး Objective ကောင်းကောင်း
Posted by Min Thuta/ နိုဝင်ဘာ 2, 2020/ Blog/0Comment
အခြေခံသိထားရမဲ့ SEO Tips များ SEO အကြောင်းကိုလေ့လာနေတဲ့သူတစ်ယောက်လား?
ဒါမှမဟုတ် သင့်လုပ်ငန်းအတွက် SEO ကိုအသုံးပြုဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်လား? SEO နဲ့မရင်းနှီးသေးတဲ့ Beginner တွေအတွက် အခုဖော်ပြပေးမဲ့ Tip တွေက သင့်အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေမယ့်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Tip တွေကို မဖော်ပြခင်မှာ SEO ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို အရင်ဖော်ပြပေးပါမယ်။ SEO ရဲ့အရှည်ကောက်ကို Search Engine Optimization လို့ခေါ်ပြီး Digital
Posted by Min Thuta/ နိုဝင်ဘာ 1, 2020/ Blog/0Comment
Windows 10 အတွက်ရွေးချယ်စရာ Free Music Player App အချို့
Windows 10 ကိုလည်း အသုံးပြုနေတယ်၊ သီချင်းနားထောင်ရတာကိုလည်း နှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ Windows 10 User တွေအတွက် Windows 10 မှာ ရွေးချယ်စရာ Free Music Player App အချို့ကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်…
ဒီ Music Player လေးကတော့ သင့် Windows ပေါ်က သီချင်းတွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Quality မျိုးတွေနဲ့ခံစားနားဆင်နိုင်ဖို့
Posted by Min Thuta/ အောက်တိုဘာ 31, 2020/ Blog/0Comment
Digital Marketing အတွက်အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းအချို့
Digital Marketing ဆိုတာ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ကျယ်ပြန်စွာ အသုံးပြုလာကြတဲ့ Online Marketing တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Internet ကိုကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုလာကြတဲ့ အတွက် Business တွေက Digital Marketing ကို Strategy မျိုးစုံနဲ့ အသုံးပြုနေကြပါပြီ။ Digital Marketing မှာ နယ်ပယ် အမြောက်အများရှိတဲ့ ကြားထဲက အရေးပါတဲ့ Digital
Posted by Min Thuta/ အောက်တိုဘာ 29, 2020/ Blog/0Comment
Stayhome ကာလမှာ Brainstorm လုပ်‌ပေးနိုင်မယ့် Game များ
အခုလို Stayhome ကာလမှာ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ တွေးခေါ်မှုစွမ်းရည်တွေတိုးတက်လာဖို့အတွက် Game အချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်… ဒီ Game တွေက ဉာဏ်ရည်တိုးတက်လာစေမယ့် ဉာဏ်စမ်းပုံစံတွေကို Step အဆင့်ဆင့်နဲ့ ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ ကဲဒီတော့ Game တွေကိုဖော်ပြပေးသွားပါမယ်…
ဒီဂိမ်းက သင့်ရဲ့ သင်္ချာဉာဏ်စွမ်းကို မြင့်တင်ပေးနိုင်မယ့် Game တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခုထဲတင် မဟုတ်ပဲ Step တွေမြင့်လာတာနဲ့ သင့်ရဲ့ တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းနဲ့
Posted by Min Thuta/ အောက်တိုဘာ 28, 2020/ Blog/0Comment
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု ရောင်းအားတက်လာဖို့ဆိုရင် ဘာတွေလိုလဲ
လုပ်ငန်း ဒါမှမဟုတ် ကုန်ပစ္စည်း ရောင်းအားကျဆင်းနေတယ် ရောင်းအားတက်သင့် သလောက်မတက်ဘူးဆိုရင်တော့ ယခုဖော်ပြမဲ့အခြေခံအချက်တွေကို လိုက်နာဖို့လိုနေပါပြီ။
ရရှိဖို့ကိုဦးစားပေးတတ်ကြပါတယ်။ အရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့အခါ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ဖို့ အဓိကဆိုတဲ့အချက်ဟာ မှန်သင့်သလောက်တော့မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဓိက ဦးစားပေးသင့်တာ Customer ရဲ့ မိမိလုပ်ငန်း ဒါမှမဟုတ် ကုန်ပစ္စည်း အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုပါ။ Customer အား မိမိလုပ်ငန်း ဒါမှမဟုတ် ကုန်ပစ္စည်း အပေါ်စိတ်ပါဝင်စားလာအောင်ဆွဲဆောင်ပြောဆိုနိုင်ပါက
Posted by Min Thuta/ အောက်တိုဘာ 27, 2020/ Blog/0Comment
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အိမ်ထဲမှာ နေနေရင်း Google နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာတချို့ကို ဖတ်ရှုနိုင်ရန်
Google လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ လူတိုင်းနီးပါးကတော့ ကိုယ်မသိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အင်တာနက်ရှိရင် ရှာလို့ရတဲ့ အရာလို့ သိထားကြပါတယ်။ နည်းနည်းပိုသိတဲ့သူတွေကတော့ Google က Search Engine တစ်ခုဆိုပြီး သိကြပါတယ်။ Messenger တို့ Viber တို့တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးမပြုခင်အချိန်တုန်းက အမှတ်ရစရာ အဖြစ်အပျက်အချို့ကို Google
Posted by Min Thuta/ အောက်တိုဘာ 26, 2020/ Blog/0Comment
Stayhome ကာလမှာ Instagram ပေါ်က Video တွေ Download လုပ်ကြမယ်
Stayhome ကာလမှာ မိတ်ဆွေတို့ အတွက် Entertain ဖြစ်စေမယ့် အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို မျှဝေပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
ဒါကတော့ လူငယ်တော်တော်များများနဲ့ ရင်းနီးပြီးသား Social App တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Instagram မှာ Video တွေ Download လုပ်သွားနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခေတ်ထဲမှာ လူတိုင်းနီးပါး Video Download လုပ်တတ်ကြပေမယ့် Instagram
Posted by Min Thuta/ အောက်တိုဘာ 25, 2020/ Blog/0Comment
Content Marketing နဲ့ Content Strategy နှစ်ခုဟာတူညီတယ်လို့ထင်ပါသလား ?
Content Marketing နဲ့ Content Strategy နှစ်ခုဟာတူညီတယ်လို့ထင်ပါသလား ဒီနေ့မှာ Content Marketing နဲ့ Strategy ရဲ့ခြားနားချက်တွေကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Content Marketing မှာပါဝင်နေတာတွေကတော့ …
Engagement ကောင်းကောင်းရဖို့အတွက် Content Creation လုပ်ပြီး Awareness ပိုမိုရရှိဖို့အတွက်လည်း Content ကောင်းတွေနဲ့ဆွဲဆောင်ဖန်တီးခြင်း
အလားအလာရှိတဲ့ Channel တွေကနေတစ်ဆင့် Content တွေကိုဖြန့်ဝေပြီး ROIs ပိုမိုရရှိဖို့ အတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
Posted by Min Thuta/ အောက်တိုဘာ 24, 2020/ Blog/0Comment